(ဂ)-မိုင်းပန်မြို့၊ မြို့နယ်အားကစားကွင်းအား အဆင်‌့မီအားကစားကွင်းဖြစ်စေရန် ပွဲကြည့်စင်(Grand Stand)၊ Scored Board၊ ကွင်းပတ်လည်ပြေးခုန်ပစ်ကစားကွင်းများနှင်‌့ အားကစားရုံအား ယခုဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ (၁၆. ၁၁. ၂၁၀၈)
ဦးစိုင်းကျော်မိုး (မိုင်းပန် မဲဆန္ဒနယ်)
မိမိတို့မြို့နယ်သည် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ ဝေးလံသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျသည့် နယ်စပ်ဒေသအစွန်အဖျားတွင် တည်ရှိသည့် မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်သည့်အပြင် နယ်စပ်ဒေသမြို့ဖြစ်သည့်အလျောက် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပေါများသော ဒေသဖြစ်ပြီး လူငယ်လူရွယ် များအနေဖြင့် စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင်‌့စာရိတ္တ မြင်‌့မားစေရေး၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် အားကစားစိတ်ဓာတ် မြင်‌့မားလာနိုင် စေရန်အတွက် အဆင်‌့မီအားကစားကွင်းတစ်ခု အမှန်တကယ် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူများ များစွာမျှော်လင်‌့လျက် ရှိကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့မြို့တွင် အားကစားပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဘောလုံးအားကစား ကွင်းရှိသော်လည်း ဆက်စပ်သည့် ပြေးခုန်ပစ် အားကစားကွင်းများ မပါရှိခြင်း၊ ဆက်စပ်အဆောက်အဦများ မပါရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များသည် အားကစားကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ တစိုက်မတ်မတ် မလုပ်နိုင်သည့်အတွက် ဘောလုံးအားကစားကွင်းသည် ကွင်းအမည်ခံအဖြစ်သာ ရှိနေပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့မြို့နယ်ရှိ လူငယ်လူရွယ်များသည် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အတွက် အားကစားမှအစပြု၍ မလုပ်နိုင်ပါက မကောင်းသည့် အသိမှား/အမြင်မှားများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ဒုစရိုက်အမှောင်လောကနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်လာရန် တွန်းပို့နေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိုင်းပန်မြို့နယ်ရှိ လူငယ်လူရွယ်များ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေရေး၊ စိတ်ဓာတ်နှင်‌့အကျင်‌့စာရိတ္တ မြင်‌့မားစေရေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိသော မြို့နယ်အဆင်‌့မီ အားကစားကွင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ပွဲကြည်‌့စင် (Grand Stand)၊ Scored Board၊ ကွင်းပတ်လည် ပြေးခုန်ပစ်ကစားကွင်းများ၊ အားကစားရုံအဆောက်အဦတို့ကို ယခုဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
မိမိအနေဖြင့် အားကစားကတောင်းခံပါက အမြဲပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အားကစား လုပ်ခြင်းက အလွန်များပြားလှသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် Exercise Medicine အားကစားကိုယ်လက် လှုပ်ရှားခြင်းသည် ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ကို မူတည်ပြီး မိမိတို့အကြီးအကျယ် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် ပေးရန်များစွာ ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ်ဂျက်တွင် ကျန်းမာ‌ရေးက ၂၃.၅ ဘီလီယံခန့်ကို မိမိတို့ အားကစားကို ပေးလိုက်ပါကြောင်း၊ အားကစားကွင်းစသည်တို့ ပြင်ဆင်ရန် ထည့်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် အားကစားကွင်းအဆင့်မီရေးနှင်‌့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုငွေ သန်း ၅၀.၁ သန်းဖြင့် မြေသားပြုပြင်ခြင်း၊ ကွင်းပြင်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘတ်ဂျက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကျပ် ၁၉.၈ သန်းဖြင့် Inner Function (အတွင်း) ၁၅၂၆ ပေ ကာရံခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ ၂၁ သန်း ထပ်မံပေးပြီး ရုံးနှင့်မြေ ပေ ၅၀ x ၁၂ ပေ x ၁၈ ပေ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ခြောက်လပတ် ဘတ်ဂျက် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေတွင် ကျပ်သန်း ၅၀ ဖြင့် ပေ ၁၈၀၀ ရှိ အုတ်တံတိုင်းကိုလည်း ကာရံပေးခဲ့ပါကြောင်း၊
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လည်း ပြည်ထောင်စုခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ၂၉ သိန်းဖြင့် အားကစားကွင်းမြေဖို့ခြင်း၊ မြေသား ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း၊ မြေညှိခြင်း၊ သဲခင်းခြင်း၊ ကွင်းပတ်လည် ချုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ယခု ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်ပြီးစီးသွားသည့်အတွက် မိုင်းပန်မြို့နယ် ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးအားကစားအသင်း ၁၂ သင်းဖြင့်လည်း ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုစတင်ပြီး ကစားနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိုင်းပန်းမြို့နယ် အားကစားကွင်းက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမည်ပေါက်ရရှိရေးအတွက် မြေပေးမိန့်နှင့် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) ကိုလည်း တင်ပြလျှောက်ထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းပန်အားကစားကွင်း အဆင့်မီရန်အတွက် ထပ်မံလိုအပ်သော ပွဲကြည့်စဉ်၊ Scored Board ၊ မီတာ ၄၀၀ ပြေးလမ်း ဖောက်ခြင်းနှင့် အားကစားရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြုငွေစာရင်းတွင် မိမိတို့ထည့်သွင်းလျာထားပြီး ခွင့်ပြုချက်ရပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။